Nezvedu - Leyu Electric Co., Ltd.
Kuchinja Simba Magetsi
LRS Series Yakaburitsa Yakabuda Simba Magetsi
NES Nhepfenyuro Imwe Kubuditsa Magetsi
S Series Imwe Kuburitsa Simba Kuwedzera
UPS Bhatiri Chaja Simba Rokugovera
PFC Basa Rinopa Simba
Mvura isina mvura yakatungamira mutyairi magetsi
DIN Chitima Magetsi
Multiple Output (D. T .Q) Magetsi
Mini Saizi Magetsi
Yakakwira-Simba Simba Magetsi
Yakachena Sine Wave Simba Inverter
Yakachena Sine Wave Inverter Ine Chaja
Yakagadziridzwa Sine Wave Simba Inverter
Yakagadziriswa Sine Wave Inverter Ine Chaja
"Zhejiang Leyu Electric Co, Ltd." yaimbove "Yueqing Leyu Electric Co, Ltd." iyo yakavambwa mu2007. Kudzoreredza kukosha kwekuwedzera kwekugovana uye kuwedzera kwemusika.
Iyo kambani iri mune yeumambo humambo hweenzhou yueqing, yakavandudzwa hupfumi, yakafuma nhaka, mweya uye mvura yekufambisa, njanji uye mugwagwa mukuru kuburikidza, traffic iri nyore kwazvo.
Main switching magetsi, off-grid solar inverter, solar controller, chinja switch, nezvimwe.
----- Muna 2009, kambani vakatendeukira kumunda wokumwe kutengeserana, uye akawana zvinodiwa advertising.
----- Muna 2013, Bazi Rezvekutengeserana Kwekunze rakavambwa, uye musika wakawedzera kubva kuSoutheast Asia kuenda kuEurope nedzimwe nzvimbo.
----- Muna 2015, fekitori yakagadziriswa ikaendeswa mufekitori.
----- Muna 2018, bhizinesi rekunze rekutengeserana rakawedzerwa kuShenzhen uye bazi rakavambwa.
----- Pakutanga kwa2020, iyo Ministry yekune dzimwe nyika Kutengeserana zvakatama kubva kufekitori kuenda kune yakatarisana neYueqing Ali uye padhuze neTime Square.
----- Pakupera kwa2020, dhipatimendi rekushandira repasi rese rine vanhu vanomwe, inovhara mapuratifomu akawanda senge "International Station", "AliExpress", "Yakagadzirwa kuChina", "Kunze Kwekutengesa Express", "Google", "Taobao" uye "Tmall".
----- Muna 2021, pasi penyaya yekodzero, uye gadzira imwe kambani nyowani.
Leyu kambani yakazvipira kuumba yakanakisa mhando, inonamira kune itsva kufunga, dhizaini dhizaini, inogona kuenderera kupa vatengi nehupamhi hwepamusoro uye hwepamusoro sevhisi, basa rechokwadi, mukurumbira wakanaka, mukurumbira wakanaka, LeYu zvigadzirwa zvemagetsi zvakatumirwa kuEurope neUnited States, kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia, South America, Africa nedzimwe nzvimbo, vakatengesa mhiri kwemakungwa nyika dzinopfuura makumi mashanu nematunhu.
Iyo kambani yakashongedzerwa neazvino kugadzirwa tekinoroji uye yakanaka yekuyedza michina
Iyo kambani ine yakasimba technical technical, michina yemhando yepamusoro, tekinoroji yepamberi, kugona kuona kwakanyanya zvinoreva, 3, standardization iri pamusoro peyero yenyika 3%, kugadzikana kuita, basa reindasitiri, mhando yepamusoro.
Yedu "Leyu" yekunze yekutengesa timu timu inoumbwa nevechidiki vane simba uye vazere nehope. Nechivhareji chiitiko chekushanda chemakore matatu, ivo vakatsunga kuita mubatanidzwa kuedza kuvaka kambani kuita yenyika yekutanga-kirasi magetsi kambani, inova chinangwa chedu. Kambani yedu ibhizimusi repamusoro-soro rinobatanidza kutsvagisa chigadzirwa nekusimudzira, kugadzirwa, kutengesa uye mabasa ehunyanzvi.
Leyu Electric chigadzirwa chitupa kuratidza kesi
Leyu Electric yakagadzwa kwemakore gumi nemana uye yakapihwa zita rekambani yakanaka kwazvo yeku manejimendi, epamberi unit, yekutsvagisa nekusimudzira, hwaro hwakadzama, hunoshamisa hunogadzirwa, izvo zvinoita kuti chigadzirwa chedu chigadzirwa chigare chiri munzvimbo yepamusoro muindasitiri.
Izvo zvigadzirwa zvave zvichizivikanwa CE, ROHS, CCC, IP67 uye IS09001.
Leyu ane mainjiniya epamusoro ekugona kutora chikamu mukugadzirwa uye kusimudzira, iyo hombe yekugadzira tambo inokwana kuenderana nezvinodiwa nevatengi, mabasa ehunyanzvi akagadzirwa anogona kunzi ape dhizaini nekuvandudza zvinodiwa nevatengi.
Leyu Magetsi Co, Ltd.
Nhare: + 86-18906669219
Dc Push Button Chinja, Chaja Mutyairi Solar, solar bhatiri charger controller, Lw26gspad-Lock Rudzi Rwunoshandura, Solar Simba Shanduri, Solar Controller Chaja,